ချိတ်ဆွဲရန်စာတန်း: jobsinyangon-trainingschool-certificate-management level
Professional Marketing Diploma (UK) သင်တန်းကို Christmas Special Package အဖြစ် သင်တန်းကြေး 290,000/- ကျပ်
#ကျောင်းသားဦးရေကန့်သတ်ထားလို့ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားမှစိတ်ချရမယ်နော်#အနာဂတ်မှာ Professional အဆင့် - ဈေးကွက်ပညာကျွမ်းကျင်လိုသူများအတွက်......
လစဉ် ၅ သောင်းကျပ်သာ သွင်းရုံဖြင့် (UK Diploma) Professional Diploma in Marketing Management တက်ရောက်နိုင်မည့်အခွင့်အရေး .....
ဖောက်သည်သိမှ အောင်မြင်မှာမို့... ယနေ့ခေတ် အရာရာမှာ... Marketing ပညာနဲ့ ချိတ်ဆက်ရောင်းချကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် Everything is Marketing - အရာရာမှာ Marketing လိုအပ်လာတယ်။
Marketing ပညာရပ်ကို အထူးကျွမ်းကျင်လိုသူများအတွက်(လစဉ် ၅ သောင်းကျပ် အရစ်ကျ သွင်းရုံဖြင့် (UK) Banbury and Bicester College မှ တိုက်ရိုက် ပေးအပ်သော အဆင့်မြင့် Professional Diploma in Marketing Management (UK) သင်တန်းကို ဇွန်လ တွင် တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ Marketing ကျွမ်းကျင်ဝါရင့် ဆရာမများကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် သာ အချိန်ပေးပြီး မိမိနှစ်သက် အဆင်ပြေရာ MESI သင်တန်း ကျောင်းများတွင် ရွေးချယ် တက်ရောက် နိုင်ပါပြီ။
Professional Diploma in Marketing Management ကို (ဘာကြောင့်) တက်ထားသင့်ပြီလဲ… ? ? ?
- တနိုင်ငံလုံးအဆင့် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သော Marketing Ways နည်းလမ်းများကို လေ့လာလိုပါသလား။
- Marketing ဌာနများအတွက် လိုအပ်သော Marketing Plan များ၊ Adverting အစီအစဉ်များကို ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲလိုပါသလား။
- ဈေးကွက်အသစ်ချဲ့ထွင်မှု Branding အမှတ်တံဆိပ်ထူထောင်ခြင်းနှင့် Adverting ထိရောက်သော ကြော်ငြာနည်းလမ်းများနှင့် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်လိုပါသလား။
- Personal Marketing တဦချင်းစီဆိုင်ရာ တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ နာမည်ကျော်ကြားနည်းတွေကို သိလိုပါသလား။
- သင့်လုပ်ငန်းအား Franchise လုပ်ငန်းခွဲထူထောင်နည်း, Distributor ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်လျှက် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်လိုပါသလား။
- များစွာသော Customer ရရှိနိုင်ရေး Sale မဟာဗျူဟာများ၊ Service ၀န်ဆောင်နည်းများနှင့် ဖောက်သည်များစွာ ချိတ်ဆက်ရရှိလိုပါသလား။
- ယနေ့ခေတ် ၂၁ ရာစု အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းများ၏ Online Marketing အွန်လိုင်း ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာများကို ကျွမ်းကျင်လိုပါသလား။
- Marketing ပညာရပ်ကို အထူးကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ပြီး ခေတ်ပြိုင်တိုးတက်လာမှုမှာ Market Leader ဈေးကွက်ဦးဆောင်ပြီး ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်လိုပါသလား။
ဒီအဖြေတွေကို ရရှိနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ (မြို့ပေါင်း ၂၀) ကျော်အထိ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်အောင်မြင်နေသာ MESI သင်တန်းကျောင်းမှ သင်ကြားပေးသွားမည့် Professional Marketing Diploma (UK) ဒီပလိုသင်တန်းအား တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
♦️♦️Professional Diploma in Marketing Management တွင်သင်ကြားပေးမည့် အကြောင်းအရာများ၏ ဘာသာရပ်များ♦️♦️
• Marketing Concept & Creation Value
• Marketing R&D – Marketing Research
• Branding & Adverting and Brand Position
• Market Segmentation, Targeting, Positioning (STP)
• Supply Chain & Distribution Strategy
• New Product Development (NPD)
• Sale & Marketing Strategy
• Value Satisfaction & Customer Loyalty
• Customer Behavior & Customer Service
• Product & Pricing Strategy (Marketing Mix)
• Marketing & Global Competition
• Social Media & Online Marketing Strategy
• Important of 21st Century Marketing (4.0)
• Holistic Marketing Concepts
• New Marketing Mix
စာတွေ့ + လက်တွေ့ + အတွေ့အကြုံ) များဖြင့်
ဝါရင့်ဆရာ၊ဆရာမ များ ကိုယ်တိုင် အဆင့်မြင့် အသေးစိတ် သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း။
UK ကသင်ကြားရေး စနစ်များအတိုင်း ASSIGNMENT များ ၊ Group Presentation များ ဖြင့် နုိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့် သင်ရိုးအတိုင်း သင်ကြားပေးခြင်း။
Industrial Visit တွေအတွက် နာမည်ကြီးကုမ္ဗဏီများ (Fame, Coca Cola, Thilawa SEZ ) စသည့် ကုမ္ဗဏီများသို့ သွားပြီးလေ့လာနိုင်ခြင်း။
ကျောင်းသားများ စာပေ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စာအုပ်များ Online မှ လွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး magazine နှင့် Business Learning Center များ စီစဉ်ပေးထားခြင်း။
Novotel ဟိုတယ်၊ Sule Shagilar ဟော်တယ် တို့တွင် ခမ်းနားစွာ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား ဖြင့် ဘွဲ့ချီးမြှင့်ပေးပြီး၊ ထူးချွန် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း Scholarship ဆုများ နှင့် အမှတ်အများဆုံးရ ကျောင်းသားများအား Highest Mark ဆုများ ၊ သင်တန်းထဲတွင် ခေါင်းဆောင်မှု ထူးချွှန်သူများအတွက် Leadership (EC) ဆုများ ပြန်လည် ချီးမြှင့်ပေးခြင်း။
CEO & Principal (MESI Business Institute)
မှ စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Professional Diploma in Marketing Management Batch (10) သင်တန်းအစီအစဉ်
➡️သင်တန်းစမည့်ရက် ။ ။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၈ ရက် ( အပါတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့ )
➡️သင်တန်းကာလ။ ။၅ လ ( ၁- ပတ် ၁- ရက်သာ)
➡️သင်တန်းအချိန်။ ။ ညနေ ၆:၀၀ နာရီ မှ ည ၈:၀၀ နာရီ အထိ
➡️သင်တန်းနေရာ ။ ။အမှတ် (၃၃ ) ၊ မြောင်းမြလမ်း ၊စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
➡️သင်တန်းသို့ဆက်သွယ်ရန် ။ ဖုန်း - ၀၉ - ၇၈၈၈၈၈ ၄၃၄ ၊ ၀၉ ၇၈၈၈ ၉ ၉ ၇၇၄ ၊ ၀၉၇၇၇၇၃၂၂၈၂ နှင့် ၀၉ ၇၇၇၇ ၃၂၂ ၉၂
➡️သင်တန်းကြေး ။ ။ 290,000/- ကျပ်တိတိ
️စာမေးပွဲကြေး ။ ။ စင်ကာပူဒေါ်လာ $ 266
လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိပြီး၊ ကြိုတင်တက်ရောက်ရန် စာရင်းပေးသွင်း ထားသူများရှိခြင်းကြောင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါမည်
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ၊နေပြည်တော်၊ တောင်ကြီး၊စသည့် မြို့ကြီးများတွင် ဒီပလိုမာသင်တန်း (၃၅)တန်းကို တပြိုင်နက်တည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပြီး ဒီပလိုမာ ကျောင်းသားပေါင်း (၁၅၀၀) ကျော် တက်ရောက်နေတဲ့ (မြန်မာ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေးသင်တန်းကျောင်းကြီး) ဖြစ်တဲ့အတွက်⤵️
ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လာတက်ရောက် ဖို့ ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါတယ်⤵️
➡️အနာဂတ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ MESI မှာ ကျောင်းတက်ကြပါစို့..